မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့ တောင် အာရှမှာ မီတာခ ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်နေ - CeleLove
May 15, 2019 Cele Love ပြည်တွင်းသတင်း 0
အင်အယ်ဒီ အစိုးရမှ တိုင်းပြည်၏ တိုးတက် မြင့်မား လာနေသော လျပ်စစ်စွမ်းအင် လိုအပ်မှု ကို ထေမိစေရန် နောက် လာမည့် နှစ်နှစ် အတွင်း မီဂါဝပ် တထောင် ကို တရုတ်နိူင်ငံ မှ ၀ယ်ယူ ဖြည့်တင်းသွားမည်ဟု မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် လျပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးတင်မောင်ဦးက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၇ နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်က စတင် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သုတေသန ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် …. ။
သို့သော် မည်ရွေ့မည်မျှ ကုန်ကျမယ်ဆိုတာတော့ ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားခဲ့ခြင်း မရှိသေးပါဖူး။
တရုတ် ပြည်တောင်ပိုင်း Guangzhou ပြည်နယ်ရှိ အစိုးရပိုင် China Southern Power Grid (CSPG) မှ ၀ယ်ယူတင်သွင်း သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ယူနန် ရှိ Dhong Dai မှ ဗို့အားမြင့် လျပ်စစ်ဓါတ်ကြိုး လိုင်းများ သွယ်တန်းပြီး မိတ္ထီလာမှတဆင့် မူဆယ်၊ မိုင်ရယ်၊ ဟိုပုန်း၊ လွိုင်ကော် နဲ့ ပဲခူးတိုင်း ရှိ ဘုရားကြီး ဒေသများသို့ ဖြန့်ဖြူးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ CSPG သည် ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို တို့သို့လည်း လျပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးလျက် ရှိနေပါတယ် ….. ။
ပြီးခဲ့သည့် နွေရာသီ အတွင်း ပြင်းထန်တဲ့ အပူလှိုင်း ကြောင့် ဆည်ရေများ ခမ်းခြောက်ခဲ့သဖြင့် နိူင်ငံတ၀ှမ်း လျပ်စစ်ဓါတ်အား တွေ ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ လျပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ဧပြီလ အတွင်း မီဂါဝတ် ၄၀၀ ခန့် လိုအပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထို့အပြင် တိုင်းပြည် လူဦးရေ၏ ၄၄% သာ လျပ်စစ်ဓါတ်အား သွယ်တန်းပေးနိူင်ဆဲ ဖြစ်တယ်လို့လည်း လျပ်စစ် ဒုဝန်ကြီး ဦးထွန်းနိူင်ရဲ့ လွှတ်တော် အမေးအဖြေက တဆင့် သိခဲ့ရပါတယ် …. ။
လက်ရှိ အကောင်အထည် ဖေါ်နေတဲ့ နိူင်ငံတ၀ှမ်း လျပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရေး စီမံချက် National Electrification Plan (NEP) ၏ တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့က ကုမ္ပဏီ ၆ ခု နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း၊ ကရင် နှင့် မွန်ပြည်နယ်များရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၅၉၀ အတွက် ဓါတ်အားပေးလိုင်းများ နဲ့ မီးအား မြှင့်စက်များ တပ်ဆင်ပေးသွားဖို့ ရှိနေပါတယ် …. ။
မြန်မာနိုင်ငံလျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်ရဲ့ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို ယခုနှစ်မကုန်ခင်မှာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားတဲ့အကြောင်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မကွေးတိုင်း မြို့တော်ခန်းမမှာ ပြုလုပ်တဲ့ လူထုတွေ့ဆုံပွဲအတွင်း အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် …. ။
မြန်မာနိူင်ငံ လျပ်စစ်ပမာဏ ရဲ့ ၇၄.၇% သည် ရေအားလျပ်စစ်မှ ရရှိပြီး ၂၀.၅% အား သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှ ထုတ်လုပ်ပြီး ကျန် ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ ကျောက်မီးသွေး နဲ့ ရေနံတို့မှ ထုတ်လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။
လက်ရှိတွင် မြန်မာ မှ လျပ်စစ်ဓါတ်ပမာဏ အားဖြင့် ၃,၀၀၀ မီဂါဝတ်သာ ထုတ်လုပ်နိူင်ပါသေးတယ်။ ပြည်တွင်း ထုတ်လုပ်မှုရဲ့ ၁၈% သည်လည်း ဖြန့်ဖြူးရေး ပိုင်းတွင် ခေတ်မှီ ခြင်း မရှိ အိုမင်း ဟောင်းနွမ်းနေသော ဓါတ်ကြိုးလိုင်းများကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ် …. ။
သူငယ်ချင်းတယောက် တနေ့က တွက်ချက် တင်ပြချက်အရ လျပ်စစ်မီး မှန်းခြေ တယူနစ် တွင်
ဒါကို ကြည့်ရင် မြန်မာ အနေနဲ့ လွန်စွာ ဈေးချိုချို နဲ့ သုံးနေရပါတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ အစိုးရ အဖို့ နှစ်စဉ် မြန်မာ ကျပ်ငွေ ၂၈၄ ဘီလီယံ ခန့် (ဒေါ်လာ ၂၈၉ သန်း) အရှုံးခံ စိုက်ထုတ် သုံးစွဲနေရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းစရိတ်တွေ အတွက် ဟိုတလောကပဲ ရေအားလျပ်စစ်စက်ရုံ ငါး ရုံ အတွက် ပြင်သစ် ဆီက ငွေချေး ခဲ့ရပါတယ်။ ၀န်ကြီးဌာန၏ နှစ်စဉ် ၀င်ငွေသည့် ဒေါ်လာ ၁.၈၈ ဘီလီယံပဲ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် …. ။
အစိုးရ အနေနဲ့ကလည်း လူထု ရဲ့ ၀င်ငွေ အနေအထားကြောင့် တိုးကောက်လို့ မရပဲ လျပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး ကို လက်ရှိ အနေအထား နဲ့ တင်းခံနေရပါတယ်၊ ဒီငွေတွေနဲ့သာ လျပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများ တည်ဆောက်၊ လည်ပါတ်၊ မွမ်းမံ ခြင်းအပြင်း ဓါတ်အားပေးလိုင်းများ တိုးချဲ့ သွယ်တန်းသွားရေး တွေ လုပ်နိူင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ချ ယုံကြည်ရတဲ့ လျပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိနေမှသာ ပြည်ပ ရင်းနှီမြုပ်နှံမှုတွေ ဒလဟော ၀င်လာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကတော့ ရတဲ့ ၀င်ငွေ နဲ့ပဲ မနည်းလည် ပါတ်အောင် လုပ်နေရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ကတော့ တယူနစ်ကို ကျပ် ၁၁၀ ပေးနိူင်မယ်ဆိုရင် မီးမပြတ်အောင် လုပ်ပေးနိူင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ တွေ ရှိနေပြီလို့ ပြောသံလည်း ကြားလိုက်ရပါတယ် ….. ။
ကမ္ဘာဘဏ်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ မြန်မာပြည်တွင် အကောင်အထည် ဖေါ်နေတဲ့ NEP အတွက် နောက် ၁၅ နှစ်အတွင်း လျပ်စစ်ဓါတ်အား လုံလောက်ရေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဘီလီယံ ကုန်ကျသွားရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလောက်များတဲ့ ငွေတွေ ရဖို့ လျပ်စစ် ၀န်ကြီးဌာနအတွက် အကြီးမားဆုံး စိမ်ခေါ်မှု ဖြစ်လာနေပါတယ် …. ။
ဒီအတွက် လူထုဆီမှ ကောက်ခံရရှိမှု နဲ့ မလုံလောက်ပဲ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်း က ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ရအောင် ဆွဲဆောင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်း ရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ရဖို့ လွယ်ကူ ပေမယ့် လက်ရှိ ဈေးနှုန်း နဲ့ အရှုံးခံ ရောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှ လုပ်ရဲမယ် မထင်ပါဖူး …. ။